Kuuriyada Waqooyi - BBC News Somali
Posted at 8:03 2 Agoosto 20218:03 2 Agoosto 2021
Sida sheekada filmka ay tahay, labada safiir ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayay ku dhacday qisadan.
Posted at 15:48 29 Luulyo 202115:48 29 Luulyo 2021
Ilaalada madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi waxaa lagu soo xushaa shuruudo ay ka mid tahay in ay dhirirka isku mid ka yihiin Kim Jong-un.
Posted at 8:18 19 Luulyo 20218:18 19 Luulyo 2021
Kuuriyada Woqooyi oo mamnuucday lahjad Kuuriyada Koonfureed lagaga hadlo
Warbaahinta Kuuriyada Woqooyi ayaa ku guubaabisay dhalinyarada dalkaas in aanay adeegsan erayada suuqdiga ah ee laga isticmaalo Kuuriyada Koonfureed, waxaanay ku wargelisay in ay adeegsandaan afka saxda ah ee Kuuriyada Woqooyi.
Posted at 10:31 16 Luulyo 202110:31 16 Luulyo 2021
Wax ka ogow hubka Mareykanka uu isaga difaaci doono Nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi
Duleedka magaalada Albuquerque, ee gobolka New Mexico, koox khubaro ah oo ka tirsan Ciidamada Cirka ee Mareykanka ayaa soo saaray hub dhowr nooc ah: Si looga hortago weerarkasta oo Nukliyeer ah ee Kuuriyada Waqooyi kaga imaan kara.
Posted at 16:28 28 Juunyo 202116:28 28 Juunyo 2021
Reer K/Waqooyi oo ka walaacsan Kim Jong Un oo yara caatoobay?
Telefishinka qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa baahiyay wareysi aan caadi ahayn oo ay ka qaadeen nin deggan magaalada Pyongyang oo sheegay in isaga iyo dadka kale ee ku nool caasimadda "ay ka naxsna yihiin" muuqaalka Kim Jong Un.
Posted at 8:42 19 Juunyo 20218:42 19 Juunyo 2021
Kuuriyada Waqooyi ayaa goor sii horreysay gaashaanka ku dhuftay dadaallada maamulka Biden ee lagu hirgelinayo wada hadallo diblomaasiyadeed.
Posted at 11:52 7 Juunyo 202111:52 7 Juunyo 2021
Kim Jong-un oo amar kasoo saaray xirashada saraawiisha Jeans-ka
Wuxuu doonayaa in la joojiyo hadallada, qaabka timaha loo jarto iyo dharka uu ku tilmaamay 'sunta halista ah'
Posted at 7:18 26 Maarso 20217:18 26 Maarso 2021
Maxaa xilligan ku soo beegay gantaalka 'cusub' ee Kuuriyada Waqooyi?
Pyongyang ayaa sheegtay in gantaallada ay qaadi karaan hub culus oo uu ka mid yahay madaxa nukliyeerka.
Posted at 5:02 16 Maarso 20215:02 16 Maarso 2021
Gabadha awoodda badan ee la dhalatay Kim Jong-un oo digniin u dirtay Mareykanka
Gabadha awoodda badan ku leh dalka Kuuriyada Waqooyi ee la dhalatay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un ayaa uga digtay Mareykanka "in aysan xiisad sababin", marka madaxwayne Joe Biden uu diyaarinayo siyaasadaha uu kula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi.
Posted at 12:50 15 Maarso 202112:50 15 Maarso 2021
Kim Jong-un ma wuxuu wicitaanka ku dhageystay Biden?
Bishii January, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Mareykanka ay yihiin cadowga ugu wayn ee uu dalkiisa leeyahay.
Bog 1 of 5